ဆေးဖက်ဝင်အပင်အကြောင်း Archives - Myanmar Express
အိမ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ပင့်ကူ နဲ့ အခြားအင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ လွယ်ကူထိရောက်စွာ ရှင်းလင်းနည်း
အိမ်မှာ ပိုးကောင်တွေ သို့မဟုတ် အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေဆို ဘယ်လိုအကောင်မျိုးမှ မလိုချင်တတ်ကြပါဘူး။ အိမ်မှာ ပင့်ကူ
၀မ်းချူပ်ခြင်းကို သံလွင် ဆီနဲ့ ကုကြမယ်….
ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ အစာချေစနစ်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ်မရွေးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။၀မ်းချူပ်ခြင်းကို သံလွင် ဆီနဲ့ ကုလို့ရနော်
အုန်းဆီရဲ့ ဆေးဘက်ဝင် အာနိသင် (၇) မျိုး
တကယ်တော့ အုန်းဆီကို ဆံပင်တစ်မျိုးတည်းအတွက်တင် မဟုတ်ဘဲ တခြားသုံးလို့ရတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိပြီး စားသုံးခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ (၁) ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးတယ် အုန်းဆီထဲမှာပါတဲ့ Fatty Acid ဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ မောလီကျူးတွေအတွင်း သွေးပမာဏကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကြောင် ဖြစ်တဲ့ နောက်ဆက်တွက်လက္ခဏာများကို သက်သာ လျော့ပါးစေပါတယ်တဲ့။ (၂) ကိုလက်စထရောကျစေပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေတယ် နှလုံးရောဂါဖြစ်ရတာက သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောပမာဏများလို့ပါ။ အုန်းဆီက ကိုလက်စထရောကို ကျစေတဲ့အတွက် အုန်းဆီကို စားသုံးပေးရင် နှလုံးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားမှု လျော့ကျပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ (၃) အလှကုန်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တယ် အုန်းဆီဟာ ဆံသားတွေကို သန်မာစေတဲ့အပြင် အရေပြားမှာ လိမ်းပေးရင် အသားအရေ ခြောက်သွေ့မှုကို […]
ဆေးနည်း…. ၁။လက်ဖက်ခြောက်ကောင်းကောင်း(၁၀)ကျပ်သား၂။နနွင်းမှုန့် စစ်စစ် (၁၀)ကျပ်သား၃။ဆားသန့်သန့်အမှုန့်(၅)ကျပ်သား တို့ကိုအမှုန့်ပြုလုပ်၍၄။ပျားရည်စစ်စစ် (၂၀)ကျပ်သား၅။ရှောက်ရည် (၂၀)ကျပ်သားတို့နှင့်သမအောင်နာနာမွှေပေးပြီးအလုံးသေးသေးများလုံးထားရမည်။ အရိပ်အောက်မှာ အခြောက်ခံပါ။ တစ်နေ့သုံးလုံးသုံးကြိမ်၊ အစာမစားမှီကြိုတင်စားပါ။ဆေးစားပြီးတစ်ပတ်အတွင်း အစာအိမ်ရောဂါ နှင့်ဗိုက်နာဗိုက်အောင့် ၊ အကြောတက်ဝေဒနာများပါသိသိသာသာထူးခြား၍ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ အစာအိမ်ဝေဒနာရှင်သည်ဆီးမှန်ဝမ်းမှန်သွေးလေမှန်လာသည့်အတွက်နာကျင်ခံခက်သော အစာအိမ်ရောဂါအတွက်နှင့်စိတ်မဆင်းရဲစေရတော့ပါ။ မိရိုးဖလာဆေးနည်းဖြစ်၍ ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းမျှဝေ၍ ဆေးဒါနအလှူတော်ကြီးပြုလိုက်ပါသည်။ သတ္တဝါအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ။ လူတိုင်းသက်တမ်းစေ့နေနိုင်ကြပါစေ။ Ashin Mingala (Bsc,A.G.T.I)
ရွဲယိုပင်များကို ပစိဖိတ် ကျွန်းစွယ်များ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ သြစတြေးလျ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများတွင် အလွယ်တကူ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ အရွက်မှာ အစိမ်းရင့်ရောင်၊ အပွင့်မှာ အဖြူရောင်နှင့် အသီးမှာ အစိမ်းရောင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြစ်၊ ပင်စည်၊ အခေါက်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး အားလုံးဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။ ရွဲယိုပင် အခေါက်ကို ဘတ်တီးရီးယားပိုး ဝင်ခြင်းကို ကုသနိုင်သလို ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များ ဝမ်းလျှောခြင်း နှင့် အစာအိမ်နာခြင်းတို့တွင်လည်း ကုသနိုင်ပါတယ်။ ရွဲယိုပန်းပွင့်ကို မျက်စိ ယားယံခြင်း၊ မျက်ခွံ စူးရှ နာကြင်ခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာ ယောင်ရမ်းခြင်း၊ မျက်စိ သွေးကြောပေါက်ခြင်း နှင့် ချောင်းဆိုးခြင်း စသည်တို့ကို ကုသရာတွင်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရွဲယိုသီးကို […]
အိမ်ရှင်မများ နေ့စဉ်ဟင်းလျာများ ချက်ပြုတ်ကြရာတွင် အသုံးပြုသော စပါးလင်အပင်သည် ဟင်းလျာအတွက် သာမက လူတိုင်းကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူပြု အသုံးဝင်လျက်ရှိသည်။ စပါးလင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ နေရာမရွေး စိုက်ပျိုးပေါက်ရောက်နိုင်သော အပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းအပင်သည် မြက်မျိုးအနွယ်ဝင်အပင်ဖြစ်ပြီး ဟင်းစား စပါးလင်နှင့် စပါးလင်မွှေးဟူ၍ နှစ်မျိုး နှစ်စားရှိသဖြင့် စပါးလင်မွှေးသည် ဟင်းစားစပါးလင်ထက်ပို၍ အရွက်ကြီးကာ ရှည်လျားခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဈေးကွက်များ၌ ပို၍မျက်နှာပန်းလှကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိသော စပါးလင်သည် ရနံ့မွှေးပျံ့ရုံသာမကသည့်အပြင် ဆေးစွမ်းလည်း ထက်မြက်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည် စပါးလင်အပင်ကို ချန်လှပ်၍မရခြင်းကြောင့် ယင်းအပင်နှင့်အရွက်၊ အဆီတို့ ကို တိုင်းရင်းဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရာနှင့် ရောဂါများ ကုသရာ တွင် ပရဆေးစွမ်းကောင်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အိန္ဒိယ ဆေးကျမ်းများ၌ စပါးလင်မှာ အစာမကြေခြင်း၊ ခံတွင်းပျက် ခြင်းနှင့် အစာအိမ်အတွင်း၌ ပိုးနှောင့်ယှက်သော […]
ညဘက် ရှားစောင်းလက်ပတ် လိမ်းပြီးအိပ်ရင် နှစ်ရက်သုံးအတွင်း မျက်နှာအလှ ပြောင်းလဲသွားတယ်
မေဖြူဖြူက ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားဖြစ်တဲ့အတွက် Cosmetic တော်တော်များများနဲ့ မတည့်ဘူး။ မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း POND’S ကထုတ်တဲ့ Flawless Whiteလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တယ်။ ပြီးရင် သူ့ရဲ့ Day Cream, Night Cream လိမ်းတယ်။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ခါလောက်တော့ နံနက်မိတ်ကပ် မလိမ်းခင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို လိမ်းသွားတယ် မျက်နှာအေးအောင်လို့။ ညအိပ်ခါနီးလည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်အဆီကို လိမ်းဖြစ်တယ်။ အသားကိုလည်း ဖျော်သောက်တတ်တယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလှအပကို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ အသားအရေက အစပေါ့။ နဂိုရှိတာကို ပိုလှအောင် ထိန်းသိမ်းရမယ်။ နဂိုရှိတာကို မပျက်သွားအောင်လည်း ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သဘာဝနည်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်လို့ မေဖြူထင်ပါတယ်။ ညဘက် ရှားစောင်းလက်ပတ်လေးကို လိမ်းအိပ်တဲ့အတွက် နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ရေညှိတို့၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့နဲ့လည်း လိမ်းဖြစ်တယ်၊ အသားအေးလို့ပါ။ […]
လူတွေမသိသေးတဲ့ ဂျင်းရဲ့ ကောင်းခြင်း ၁၀ မျိုး
ဟင်းချက်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိသော ဂျင်းသည် ဟင်းချက်ရာတွင် သာမက အခြားသော နေရာများတွင်လည်း ဆေးဖက်ဝင်ပုံများကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။ (၁) သားအိမ် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ (၂) အူမကြီး ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ (၃) ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ အတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ (၄) ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲမှုကိုလည်း ကောင်းမွန်းစေပါသည်။ (၅) ရင်ပှုခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။ (၆) ဆီချိုရောဂါ အတွက်လည်း အထူးပင် ကောင်းမွန်ပါသည်။ (၇) ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါသည်။ (၈) အမျိုးသမီးများ ဗိုက်အောင့်ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါသည်။ (၉) တုပ်ကွေးရောဂါ များကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ (၁၀) မျိုးအောင်နှုန်းကို ကောင်းစေပါသည်။ (ရိုးရာလေး)
ကမ်းဇော်ဆီဟာ အလွန်ဆေးစွမ်းထက်သော အဖိုးတန် သဘာဝဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းဇော်ပင်ကို ကြမ်းပိုးအနံ့နှင့်ဆင်သောကြောင့် သစ်ကြမ်းပိုးပင် ဟူ၍၄င်း၊ တောင်မင်းဂွတ် ဟူ၍၄င်း ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Mahua Tree လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကမ်းဇော်ပင်၏ ပင်စည်ကို ဘုရားဆင်းထုတော် ထုလုပ်သည့်နေရာမှာ အသုံးများကြတယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ ဘာသာရေးပွဲတွေမှာ ကမ်းဇော်သီးကို လေထဲမြှောက်၍ ပူဇော်ပသလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကမ်းဇော်ပင်ဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံဒေသမှာ အများဆုံး ပေါက်ကြပါတယ်။ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါလ်နှင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှတို့မှာ ပိုမိုပေါက်ရောက်နေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြိတ်ခရိုင်နှင့် ထားဝယ်တို့မှာ သဘာဝအလျှောက် ပေါက်ရောက်ကြပါတယ်။ ကုန်းကမ်းဇော်နှင့်ရေကမ်းဇော်ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ အရောင်နှင့် အသီးပုံစံ အနည်းငယ် ကွာနိုင်ပေမယ့် အကျိုးအာနိသင်ခြင်း အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအဖြစ် အသုံးဝင်ပုံများ (၁) […]